theZOMI: Burma News International - March 25, 2013
Burma News International - March 25, 2013
The Kaw Moo Ra Karen Youth Group last week raided an island located in the middle of the Moei River and ‘detained’ suspected drug runners and seized illegal substances, ammunition and weapons. The River Moei separates Thailand from Burma.
Lashio ethnic conference ends with discussions by ethnic women leaders
The Shan Kayah Trust-building for Peace Conference in Lashio, Shan state concluded with discussions by ethnic women leaders about the many roles that women can play in the current peace process in Myanmar.
Over 100 houses located in area nearaBurma Army camp in Three Pagoda Pass Town were told by senior army officer they had to leave the area.
Burma army troops killed duringaclash with the KIA
At least 8 Burma army troops have been killed and several more injured following clashes with the Kachin Independence Army (KIA) in northern Shan state recently, according to KIA officials based in the area.
Karen News is led to understand that the death toll from the fire that destroyed the Ban Mae Surin refugee camp has now been confirmed as 35 with one person still unaccounted for.
သျှမ်းပြည်ထွက် သယံဇာတများဖြစ်သော သစ်တော၊ သတ္တုတွင်းထွက် ပစ္စည်းများတူးဖော်ခြင်းနှင့် လူထုအတွက် အကျိုးယုတ်စေသည့် စီမံကိန်းများအား RCSS ထံခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိ က အားလုံးပိတ်ပင်တော့ မည်ဟုဆိုသည်။
နယ်မြေ သတ်မှတ်ရန် RCSS/SSA တောင်းဆို
အစိုးရအား စစ်ရေး ထိန်းချုပ် နယ်မြေများ သတ်မှတ် ပေးရန် ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုစာ ရေးသား ပေးပို့ ထားကြောင်း အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်ကြီး စိုင်းဆိုင်မိန်းက ဆိုသည်။
ခနောက်စိမ်းသန့်စင်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် ထီလုံရွာခံများနှင့် ကုမ္ပဏီ ဆွေးနွေး
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ထီလုံကျေးရွာအနီးတွင် မြန်မာမဟာဓနကုမ္ပဏီမှ ခနောက်စိမ်း သန့်စင်စက်ရုံ လာရောက် တည်ဆောက်ရန် ထီလုံရွာသူရွာသားများနှင့် ယမန်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
ရွာပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စ ညှိနှိုင်းမှုမရှိပါက ချာခန်းဒေသခံများ လက်မခံနိုင်
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ရေဖြူမြို့နယ် ထိန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း နယ်မြေတွင် ပါဝင်နေသည့် ချာခန်းဒေသကို ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာမှ ဖိအားပေး ခိုင်းစေနေသော်လည်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု မရှိပါက ပြောင်းရွှေ့ပေး မည် မဟုတ်ကြောင်း ချာခန်းဒေသခံများက ပြောသည်။
မိတ္ထီလာမြို့မှ အဓိကရုဏ်းဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်များအတွက် အိုးအိမ် အစားထိုး ဆောက်လုပ်ပေး ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက စီစဉ်နေကြောင်း မြို့ခံ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်သူများကို အစွမ်းကုန် အရေးယူမည်
အစိုးရအနေနှင့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုများကို အစွမ်းကုန် တားဆီးကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်မည်ဟု မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေကြသူတွေနဲ့ နယ်စပ်ဒုက္ခသည် စခန်းကနေ ပြန်လာတဲ့သူတချို့ တို့ကို တရားဝင် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရဲသား သုံးဦးကို လွှတ်ပေးရန် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန တောင်းဆို
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာက ဖမ်းဆီးထားသော ရဲသား ၃ ဦးနှင့် အရပ်သား တစ်ဦးတို့ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ရှမ်းမြောက်တွင် KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်နေ
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင် မြို့နယ်ရှိ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တခု ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း KIA အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
ဒေသတွင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်မှုရ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် မိုင်းယင်အုပ်စုတွင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားပြီး နောက် ပိုင်း ဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားပြီဖြစ် ကြောင်း လူငယ်များက ပြောဆိုသည်။